Mkpughe 14 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
14 M wee hụ, ma, lee! Nwa Atụrụ+ ahụ ka o guzo n’Ugwu Zayọn,+ ya na otu narị puku na puku iri anọ na puku anọ,+ bụ́ ndị e dere aha ya na aha Nna ya+ n’egedege ihu ha. 2 M wee nụ ụda nke si n’eluigwe, dị ka ụda nke ọtụtụ mmiri,+ dịkwa ka ụda nke oké égbè eluigwe; ụda ahụ m nụrụ dịkwa ka nke ndị na-agụ egwú, bụ́ ndị ji ụbọ akwara+ na-abụ abụ mgbe ha na-akpọ ụbọ akwara ha. 3 Ha na-abụkwa abụ+ nke dị ka ọ̀ bụ abụ ọhụrụ+ n’ihu ocheeze ahụ na n’ihu ihe anọ ahụ dị ndụ+ na ndị okenye ahụ;+ ọ dịghịkwa onye nwere ike ịmụta abụ ahụ ma e wezụga otu narị puku na puku iri anọ na puku anọ ahụ,+ bụ́ ndị e si n’ụwa zụta.+ 4 Ndị a bụ ndị na-ejighị ụmụ nwaanyị merụọ onwe ha;+ n’eziokwu, ha bụ ndị na-amaghị nwaanyị.+ Ndị a bụ ndị na-eso Nwa Atụrụ ahụ n’agbanyeghị ebe ọ na-eje.+ E si n’etiti ụmụ mmadụ zụta+ ha dị ka mkpụrụ mbụ+ a zụtaara Chineke na Nwa Atụrụ ahụ, 5 a hụghịkwa okwu ụgha ọ bụla n’ọnụ ha;+ ha enweghị mmerụ.+ 6 M wee hụ mmụọ ozi ọzọ ka ọ na-efegharị n’etiti eluigwe,+ o nwekwara ozi ọma ebighị ebi+ nke bụ́ ozi obi ụtọ ọ ga-ezisara ndị bi n’ụwa, mba niile na ebo niile na asụsụ niile na ndị niile,+ 7 o ji oké olu na-asị: “Tụọnụ egwu Chineke,+ nyekwa ya otuto,+ n’ihi na oge awa nke ikpe si n’aka ya eruwo,+ n’ihi ya, feenụ Onye ahụ nke kere+ eluigwe na ụwa na oké osimiri na isi mmiri niile.”+ 8 Mmụọ ozi ọzọ, bụ́ nke abụọ wee sochie, na-ekwu, sị: “Ọ dawo! Babịlọn+ Ukwu ahụ adawo,+ bụ́ onye mere ka mba niile ṅụọ mmanya+ nke iwe nke ịkwa iko ya!”+ 9 Mmụọ ozi ọzọ, bụ́ nke atọ, wee sochie ha, jiri oké olu sị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla efee anụ ọhịa+ ahụ na onyinyo ya,+ ma nata akara n’egedege ihu ya ma ọ bụ n’aka ya,+ 10 ọ ga-aṅụkwa mmanya nke iwe Chineke,+ bụ́ nke a na-agbanye n’ime iko nke ọnụma ya n’agwaghị ya agwa, a ga-ejikwa ọkụ na sọlfọ+ mekpaa ya ahụ́+ n’ihu ndị mmụọ ozi dị nsọ na n’ihu Nwa Atụrụ ahụ. 11 Anwụrụ ọkụ nke mmekpa ahụ́ ha na-akwụgokwa ruo mgbe niile ebighị ebi,+ ha enweghịkwa izu ike ehihie na abalị, ya bụ, ndị ahụ na-efe anụ ọhịa ahụ na onyinyo ya ofufe, na onye ọ bụla nke natara akara+ nke aha ya. 12 Ebe a ka a chọrọ ntachi obi n’aka ndị nsọ,+ bụ́ ndị na-edebe ihe Chineke nyere n’iwu+ ma na-agbaso okwukwe+ Jizọs.” 13 M wee nụ olu nke si n’eluigwe sị: “Dee, sị: Obi ụtọ na-adịrị ndị nwụrụ anwụ,+ bụ́ ndị na-anwụ n’ime Onyenwe anyị+ site ugbu a gaa n’ihu.+ Ee, ka mmụọ nsọ na-ekwu, ka ha zuru ike ná ndọgbu ha dọgburu onwe ha n’ọrụ, n’ihi na ihe ha mere na-eso ha aga.” 14 M wee hụ, ma, lee! igwe ojii na-acha ọcha, na otu onye nke yiri nwa nke mmadụ+ nke nọ n’elu ígwé ojii ahụ, o kpukwa okpueze ọlaedo+ n’isi ya, mma owuwe ihe ubi nke dị nkọ dịkwa n’aka ya. 15 Mmụọ ozi ọzọ wee si n’ebe nsọ nke ụlọ nsọ ahụ pụta, jiri oké olu tikuo onye ahụ nọ n’elu ígwé ojii ahụ, sị: “Tinye mma owuwe ihe ubi gị ghọrọ mkpụrụ,+ n’ihi na oge awa ịghọ mkpụrụ eruwo, n’ihi na ihe ubi+ nke ụwa achawo acha nke ọma.”+ 16 Onye ahụ nke nọ ọdụ n’elu ígwé ojii ahụ wee setịa mma owuwe ihe ubi ya n’ụwa, e wee ghọọ mkpụrụ nke ụwa. 17 Mmụọ ozi ọzọ wee si n’ebe nsọ nke ụlọ nsọ ahụ dị n’eluigwe+ pụta, ya onwe ya jikwa mma owuwe ihe ubi nke dị nkọ. 18 Mmụọ ozi ọzọ wee si n’ebe ịchụàjà ahụ pụta, o nwekwara ikike n’ebe ọkụ dị.+ O wee jiri oké olu gwa nke ahụ ji mma owuwe ihe ubi, sị: “Tinye mma owuwe ihe ubi gị dị nkọ ma ghọọ ụyọkọ mkpụrụ vaịn nke ụwa,+ n’ihi na mkpụrụ ya achawo acha.” 19 Mmụọ ozi ahụ+ wee tinye mma owuwe ihe ubi ya n’ụwa ma ghọọ mkpụrụ vaịn+ nke ụwa, o wee wụba ya n’ime nnukwu ebe nzọchapụta mmanya nke iwe Chineke.+ 20 E wee zọchaa mkpụrụ vaịn ahụ n’ebe nzọchapụta mmanya nke dị n’azụ obodo,+ ọbara wee si n’ebe nzọchapụta mmanya ahụ na-asọpụta, tookwa ruo n’eriri e kere ịnyịnya n’olu,+ ruo ebe dị otu puku na narị fọlọng isii.*+
^ Ihe dị ka narị kilomita abụọ na iri itoolu na isii.